Nepal's Leading News Portal .
चितवन – चितवनमा बस दुर्घटना हुँदा ३८ जना घाइते भएका छन् । काठमाडौँबाट सर्लाहीको मलङ्गावातर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ५३४४ नम्बरको रात्रिबस भरतपुर महानगरपालिका–१२ आस्था चोकमा गए राति १२ः३० बजे दुर्घटना हुँदा ३८ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
घाइतेमध्ये एकको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार बस आफैँ अनियन्त्रित भई सडक छेउको पीपलको रुखमा ठक्कर खाएर दुर्घटना भएको हो । घाइतेको पुरानो मेडिकल कलेज र भरतपुरको नयाँ मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । घाइतेमध्ये २७ को अवस्था मध्यम रहेको छ । यस्तै १० जना सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा चालक पनि सामान्य घाइते भएका छन् । बसमा करिब ४५÷४६ जना सवार रहेको थियो । बसका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।नेपालीहरूको महान चाड बडादसैँको अवसरमा सरकारी तथा गैरसरकारी लगायतका अधिकांश कार्यालयका कर्मचारीको दसैँ बिदा हुने गर्छ । अझ सरकारी स्कुलमा त १५ दिन अगाडि घटस्थापनादेखि नै सार्वजनिक बिदा दिने चलन छ । टीका जमरा
लगाई आफूभन्दा ठूलाबडाको आशीर्वाद थापेर पिङ खेल्दै रमाइलो गरी सबै नेपाली नागरिकले दसैँ मनाइरहँदा सुरक्षाकर्मी भने अहोरात्र खटी सुरक्षा दिइरहेका हुन्छन् । वर्ष दिनमा आउने महान् चाड दसैँमा आफ्नो सन्तान घर फर्किन्छ भन्ने आस कुन बाबुआमाको नहुँदो हो र ! तर फौजीका लागि भने यो अवसर विरलै जुर्छ । तर आफ्नो कर्तव्यको अगाडि उनीहरू नतमस्तक हुन्छन् । परिवारको खुसीभन्दा सर्वसाधारणको सुरक्षा उनीहरूका लागि पहिलो प्राथमिकता बन्छ ।रातदिन नभनी उनीहरू अहोरात्र ड्युटीमा खटिन्छन् । थोरै त्यस्ता भाग्यमानी फौजी पनि छन्, जसले घर परिवारसँगै दसैँ मनाउने सौभाग्य पाउँछन् । धेरैले त ड्युटीमै टीका लगाउँछन् र कार्यस्थलमै खुसी साट्दै दसैँ खल्लो बन्न नदिने प्रयास गर्छन् ।यसरी हेर्दा नागरिकलाई सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मीको दसैँ खल्लो त देखिन्छ । तर पनि उनीहरू सामाजिक सेवामा तल्लीन हुन पाउँदा निकै खुसी छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले आफ्ना आमाबुबाको हातबाट टीका नलगाएको ३ वर्ष भयो । प्रहरी सेवाको २४ वर्षे अवधिको अधिकांश दसैँ उनले कार्यक्षेत्रमै विताएका छन् ।
आमा-छोरा मिलेर बुबालाई मा’रेपछि…
officialkhabar.com गण्डकी प्रदेशको राजधानि पोखरा वाट खोज मुलक समाचार सूचना प्रविधी को माध्यम बाट नागरिक मा पुर्याउने उदेश्यका साथ Officialkhabar प्रा लि पोखराबाट सञ्चालित अनलाइन पोर्टल हो !
सञ्चालक : प्रकाश आचार्य
सम्पादक : विकल्प बस्नेत
रिपोर्टर : नबिन छेत्री
सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता
ईमेल : optionmitsuwa@gmail.com
फोन नं. : 061-467569
ठेगाना : पोखरा–१, कास्की गण्डकी प्रदेश , पोखरा ,नेपाल
Copyright@ Officailkhabar.com	| Theme: News Portal by Mystery Themes.